Mogadishu Journal » Xog-hayihii hore ee Qaramada Midoobay Koofi Annaan oo Saakay Geeriyooday da’da 80 Jir
Xog-hayihii hore ee Qaramada Midoobay Koofi Annaan oo Saakay Geeriyooday da’da 80 Jir
Mjournal :- Koofi Anaan oo ahaa xogxayihii hore Qaramada Midoobay ayaa saakay oo Sabti ah u geeriyooday Xanuun mudo yar haayey.
Mr, Koofi Anaan oo ku dhashay dalka Gaana ee Africa sanadkii 1938, Koofi Annaan oo waxbarasha u aaday dalka Mareykanka isaga oo wax kasoo bartay jaamacada Macalester Colllege oo ku taala magaalada St. poul ee gobolka Minnesota. Mr, Annan oo shaqa kahelay qaramada midoobay sanaddii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii 1962, Annaan oo kasoo shaqeeyey hay,adda caafimaadka aduunka ee fadhigeedu yahay Jineeva.
Anaan oo noqday madaxii Qaramada midoobay 1997 ilaa 2006 waxaa uu Koofi Anaan ahaa madax kasoo shaqeeyey laama kamid ah qaramada midoobay isagoo noqday xoghaye qaramada midoobay laga soo doortay madaxda golaha qaramada midoobay dhexdiisa.
Annaan oo la gudoonsiiyey Nobel Peace prize isaga oo ah xoghayaha qaramada midoobay sanadkii 2001.
RW Kheyre oo ku amray Diblomaasiyiinta Safaaradda Sudan in ay degdeg ku soo galaan dalka